Maxjar xoolaha oo noqonaya kii ugu weynaa oo laga furay Kismaayo - BBC News Somali
Maxjar xoolaha oo noqonaya kii ugu weynaa oo laga furay Kismaayo
25 Agoosto 2017
Xigashada Sawirka, Jubaland Authority
Sheeybaar casri ah ayaa ku dhexyaala maxjarka
Magaalada Kismaayo waxaa laga furay maxjar weyn oo xoolaha ah kaasi oo loogu talogalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha laga dhoofin doono dekada Kismaayo.
Shaafi Raabi Kaahin oo ka mid ah ganacsatada maalgalisey maxjarkan, ahna xoghayaha guud ee Rugta Ganacsiga Soomaaliyeed ayaa BBC uga waramay muhiimadda maxjarkan, wuxuuna yiri "Maxjarkan muddo fara badan ayuu qaatay diyaarintiisa, in qalab casri ah la keeno, maxjaradii hore ee Soomaaliya ee waqti hore la furey in uu ka duwanaado, juquraafi ahaan Jubbalanad waxa ay ku taalaa cirifkii Soomaaliya, meelaha ugu badan ama loo maleynayo in xoolaha ugu badan Soomaaliya ay ka dhoofi doonaan waa Kismaayo".
Sida uu xafladdii furitaanka ka sheegay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam , sababta maxjarka loo furey oo kaliya ma ahan in lagu baaro xoolaha la dhoofiyo, balse wuxuu leeyahay muhiimad kale "Marka la eego xoolaha Magaalada lagu qalo waxaan doonaynaa in Caafimaadkooda uu yahay mid la isku halayn karo sidaas darted waxaan rajaynayaa in halkan hawsha barista lagu samayn doono" ayuu yiri madaxweynaha Jubbaland .
Adeegyada uu qabanayo maxjarka ayaa waxaa ka mid ah baaritaanka caafimaadka xoolaha, naaxintooda iyo in la damaanad qaado in xoolaha ay xanuuno ka badqabaan si loogu suuq geyn karo waddamada kale.
Wuxuu noqonayaa maxjarkii ugu horeeyey ee Kismaayo laga furo
Shaafi Raabi waxa uu sheegay in ay diyaar yihiin 10 kun oo dibi oo duleedka Kismaayo daaqaya oo la doonayo in maxjarka lagu xareeyo, isaga oo intaas ku daray in gobollada Jubbooyinka iyo Gedo ay yihiin kuwa ay ku noolyihiin xoolaha ugu badan Soomaaliya, kuwaasi oo markii hore masaafo dhaadheer loo safrin jirey si looga dhoofiyo dekadaha Muqdisho ama Boosaaso.
Illaa dhawr maxjar oo kale ayaa ka furan dalka, gaar ahaan Muqdisho, Boosaaso iyo Berbera, halkaas oo dekadaha ku yaala laga dhoofiyo xoolaha.
Inkasta oo ay jiraan caqabado inta badan soo foodsaara dhoofka xoolaha Soomaaliya, maadaamaa waddamada Carabta ay mararka qaar xayiraad kusoo rogaan dhoofka iyaga oo sabab oga dhigaya in xoolaha Soomaalida ay xanuuno qabaan, haddane dowladda ganacsatada xoolaha iyo dowladda Soomaaliya ayaa dadaalo badan u galay sidii ay oga hortagi lahaayeen in xayiraad la saaro xoolaha .
Xigashada Sawirka, Wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliya
Wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliya Sheekh Nuur iyo dhiggiisa Sucuudiga Cabdiraxmaan Al Fadil
Dhawaan waxaa safar ku tagay dalka Sucuudiga wasiirka xanaanada xoolaha federaalka Sheekh Nuur Maxamed Xasan oo kulan la qaatay dhiggiisa dalka Sucuudiga Cabdiraxmaan Cabdul Muxsin Alfadil, wuxuuna wasiirka sheegay in labada dhinac ay ka wada hadleen arrimo la xiriira dhoofka xoolaha.
Wasiirka ayaa Sucuudiga u sheegay in xoolaha Soomaalida ay ka caafimaad qabaan wax xanuuno ah.
Sida lagu sheegay warbixintii ugu dambeysay ee ay soo saartay hay'adda cuntada iyo beeraha Qaramada Midoobey ee FAO ee lasoo saaray sannadkii 2015-kii, dhoofka xoolaha Soomaaliya waxa uu kor u kacay 5%, waxaana la dhoofiyey 4.6 milyan oo riyo iyo iddo ah, 295,000 lo' ah iyo 72,000 oo geel ah.
FAO ayaa waxa ay sheegtey in xoolalayda Soomaalida ay ka kaalmeyso xagga caafimaadka xoolaha, iyada oo la talaalay 12 milyan oo xoolo ah Soomaaliya oo dhan.
Dhoofka xoolaha ayaa ah dakhliga ugu badan ee dibada kasoo gala Soomaaliya.
Soomaaliya oo beenisay in xoolaheeda ay cudur qabaan
TOOS Xoogagga Ahlu-sunna oo mar kale ku soo rogaal-celiyay degmada Guriceel
3 Guul darro oo ay ka mid tahay dacwdada badda oo dowladda Uhuru ay la kulantay
18 Oktoobar 2021
15 Oktoobar 2021
Wax ka ogow sida Magaca Muxammad uu caan uga sii noqonayo UK
Lammaane xafladda arooskooda ku tagay digsi weyn gudihiis
Farxad ayay la ilmeeyeen markii dib lo furay Masjidka Xaramka
Wax ka ogow Markabka milatari ee ugu weyn caalamka
Sidee loo sugaa amniga madaxda caalamka?
16 Oktoobar 2021
Dilal hadal hayn dhaliyay oo dad 'Soomaali ah ay ka geysteen' dalalka reer Galbeedka
Madaxweynihii hore ee Mareykanka ee xafiiskiisa dhigtay kitaabka Quraanka
Ninkii Soomaaliga ee loo haystay dilka xildhibaanka UK oo maanta la dhageystay kiiskiisa